Google Search ၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အကြံပေးချက်များ
Posted by ကို Tranquillus | စက်တင်ဘာ 7, 2021 | web ပေါ်မှာ
Cette အခမဲ့သင်တန်း သင့်အားပြသရန်ရည်ရွယ်သည် google ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ရိုးရှင်းသော ရှာဖွေမှုဘားတစ်ခုအတွက် အကန့်အသတ်မရှိပါ။ သင်ယူရလိမ့်မယ်။ Google search ၏ parameters အားလုံးကိုကျွမ်းကျင်သည် သွန်းလောင်း အရည်အသွေးအချက်အလက်များလက်လှမ်းမီစေရန်သင်၏ရလဒ်များကိုစီစစ်ပြီးသန့်စင်ပါ.
ဤအစီအစဉ်တွင် အခမဲ့သင်တန်း sur la google search
ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများထက် PDF, DOC, XLS ဖိုင်များကိုရှာပါ၊ တိကျသောရက်စွဲတစ်ခုတွင်အညွှန်းကိန်းရလဒ်များကိုရယူသုံးပါ၊ ရလဒ်များကိုပြသရန်ကန့်သတ်ပါ၊ ဘာသာစကားတစ်ခု၏ရလဒ်ကိုပြပါ၊ SafeSearch ကိုသုံးပါ။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး အားမသင့်တော်သောအကြောင်းအရာများမှကာကွယ်ရန်လုပ်ဆောင်ချက် ... နှင့်အခြားအရာများစွာ
Un MCQ သင်တန်းကမင်းရဲ့ဗဟုသုတအသစ်တွေကိုအတည်ပြုပေးလိမ့်မယ်။
ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိတယ် Google အကြံပေးချက်များ အတွက် ထိရောက်သောရှာဖွေရေး.
Google Search ၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အကြံပေးချက်များ အောက်တိုဘာ 15, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် Free Excel: ဆဲလ်တစ်ခုအားတွက်ချက်မှုတစ်ခုတွင်အဘယ်ကြောင့်အေးခဲအောင်လုပ်ရမည်နည်း။
လွန်ခဲ့သော"သင်ယူရန်သင်ယူခြင်း" သင်ခန်းစာ - ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ယူသူများကသက်သေခံသည်
အောက်ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု- ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို ဥရောပသမဂ္ဂအဆင့်တွင် တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။
PowerPoint Online ကိုစူးစမ်းပါ
အခမဲ့ Blockchain နှင့် Bitcoin လေ့ကျင့်ရေး (အစပြုသူ)
ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးပါ